Global Voices teny Malagasy » Mili-Pitadiavana an’Aterineton’i Kremlin Manivana Ny Vokatra Azo rehefa Mikaroka Ny ‘Charlie Hebdo’ · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 14 Janoary 2015 19:18 GMT 1	 · Mpanoratra Kevin Rothrock Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Rosia, Mediam-bahoaka, Sivana, Vaovao Mafana, Akon'ny RuNet, GV Mpisolovava
Mananika ny anjatony dolara  ankehitriny ao amin'ny eBay ny famoahana farany nataon'i Charlie Hebdo, ilay gazety-boky Frantsay mpananihany, nivoaka tamin'ny herinandro notafihan'ny mpampihorohoro tamin'ny herinandro. Fa raha manao topi-maso mitady ny sarin'ny fonon-gazety ao amin'ny Sputnik, mili-pitadiavana  iray avy amin'ny governemanta rosiana mbola mivoaka amin'ny endrika beta [fanandramana efa matotra] tamin'ny herintaona ianao dia tsy hahita zavatra betsaka loatra.
Androany vao maraimbe, hitan'ny  Rosiana mpisera aterineto fa tsy misy sary hita mihitsy amin'ny vokatra rehefa atao ny fitadiavana ny “Charlie Hebdo” (amin'ny soratra Latina na Syrilika), raha tsy jerena ny fanovana ataon'ilay mitady eo amin'ny fitadiavana atao. Ny fitadiavana ao amin'ny Google sy ny Yandex amin'ny fangatahana mitovy ihany anefa, mandritra izany fotoana izany, dia ahafaha-mamoaka sarin'ny fonon-gazety am-polony an'ny Charlie Hebdo nandalo taona maro.
Ny fanapahan-kevitr'ilay mili-pitadiavana izay ny ao Kremlin no tompony dia tanteraka taorian'ny fandrahonana nataon'ny sampan-draharahan'ny fanarahamaso ny media rosiana iray, Roskomnadzor, ny gazety ho rohizana amin'ny raharahan-keloka bevava raha vao mamoaka ny sariitatra maneso ny olo-malaza ara-pivavahana. Tamin'ny taratasy miavaka manokana nomena ny media tao an-toerana, ny biraon'ny Roskomnadzor ao Kamchatka no nampitandrina  fa hotoriany ho “ekstremista” any amin'ny fitsarana izay rehetra mamoaka ireny vontoaty ireny.
Mandritra izany fotoana izany ny Repoblikan'i Tsetsenia ahitana ny Miozolomana ho maro an'isa ao, dia tondroin'i Ramzan Kadyrov ho “fahavalon'ny Finoana Miozolomana ,” ny talen'ny famoahan'ny Akon'i Moskoa Alexey Venediktov sy ilay mpanakarembe iray nanao sesitany ny tenany Mikhail Khodorkovsky, rehefa nandrisika ny mpanao gazety hanohy ny marika famazivaziana ahafantarana ny Charlie Hebdo ireo lehilahy roa ireo. Androany ny governemanta Tsetsenina no nanambara hanomana fihetseham-bahoaka  “an'hetsiny” ao Grozny ho fanoherana ny “famoahan[-kafatra] anti-Islamika ataon'ny fampitam-baovao tandrefana.”
Araka ny navoakan'ny tranonkala rosiana TJournal.ru, ny Rostelekom mpiara-dia amin'ny Sputnik hatreto  dia tsy manaiky ny haneho hevitra momba ny fanivanana tarataratra ny fonon-gazetin'ny Charlie Hebdo .
Tamin'ny Septambra 2014, namoaka voka-panadihadiana  momba ny zato andro voalohan'ny Sputnik an-tserasera ny sampam-baovao Inferfax, ka nahita fa nifintina hatramin'ny 90 isanjato ny isan'ireo mpitsidika ilay mii-pitadiavana raha ampitahaina ny tamin'ny voalohany. “Tao anatin'ny 100 andro voalohany nisiany 100, dia nidina hatrany amin'ny manakaiky ny zero ny fahalianana amin'ny Sputnik,” hoy ny fehin'ny tatitra.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/01/14/67117/
 Mananika ny anjatony dolara: http://money.cnn.com/2015/01/14/media/charlie-hebdo-ebay/
 fahavalon'ny Finoana Miozolomana: http://newsru.com/russia/09jan2015/echo.html